Posted by ဇနိ at 5:54 PM
PAUK November 25, 2008 at 6:13 PM
PAUK November 25, 2008 at 6:15 PM
khin oo may November 25, 2008 at 6:17 PM
ပေါက်. နောက်မှ ရောက်လာပြီးတော့။..
လာပြန်ပြီ.. မိဆိုးဟင်း အနှစ်တဲ့. ရန်ကုန်သူ မသိပါ..
တခါမှ မစားဘူးလို့ အသည်းယားယားနဲု့မြည်းကြည့်သွားပါကြောင်း.
Moe Cho Thinn November 25, 2008 at 7:36 PM
နဘဲ ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပေမဲ့ ဟော့ပေါ့လို ဟာမျိုး၊ ချစ်ခင်သူတွေ အတူ စု စားကြရတဲ့ဟာမျိုး လို့ ထင်ရတာပဲ။ အဲဒါကို နိနိ တယောက်တည်း စားနေတော့ အဖော်ရအောင် မကြိုက်သော်လည်း မမ kom တို့ ပေါက်တို့နဲ့ အတူ တို့လဲ လာထိုင် စားသွားပါတယ်။
ထည့် ထည့် နိနိ၊ ထပ်ထည့် စား။
Yu Wa Yi November 25, 2008 at 7:46 PM
အသီးအရွက်တွေက လတ်ဆတ်ပြီး ချိုမယ့်ပုံပဲနော်။ ရှလွတ်..။
A Linn Nyi November 25, 2008 at 7:48 PM
နိနိရေ...ညဘက်ကြီး လာလည်မိတာ ဒုက္ခရောက်ပြီ။ နဘဲ့ကြည့် ပြီး ဗိုက်ဆာလာလို့ ..ရှလွတ်ပလွတ်။ အမလဲ နဘဲ့ကြိုက်တယ် :P
လင်း November 25, 2008 at 8:15 PM
ဟင့် သိပ်တောင်မကျန်တော့ပါလား။ ရှေ့ ကလူတွေ စားသွားတာ။ ကျန်ကောက်ကောက်ပြိးတီးသွားတယ်။ ထပ်ချက်ပါအုန်း
၀ါဝါခိုင်မင်း November 26, 2008 at 2:27 AM
နဘဲစားသွားတယ်နော်.. အိုအိရှီးးးးးးး)
- November 26, 2008 at 8:49 AM
အစ်မချက်တဲ့ အစားအစာတင်တိုင်း နောက်ကျမှ ရောက်တတ်ပေမယ့် နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (နဘဲ)နဲ့(မိဆိုးဟင်း)ဆိုတာတော့ သေချာ မသိခဲ့ပါဘူး။
May Moe November 26, 2008 at 10:56 AM
မစားဖူးဘူး မမနိ ဟော့ပေါ့ လိုပဲထင်တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသီးအရွက်တွေများကြီး ကြိုက်တယ် :D
Taungoo November 26, 2008 at 12:01 PM
မိဆိုးတဲ့၊ မိဆော့တဲ့၊ နဘဲတဲ့
မသိပါဘူး ရွာကကလေးတွေများလားလို့။ နောက်မှ ဂျပန်စာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ စား စား မမနိရေ။ ကိုကိုနိကို လွမ်းလွမ်းနဲ့ စား။
Republic November 26, 2008 at 3:55 PM
မကွိ ... နဘဲ ရှိသေးလားဗျာ ၊၊ ကုန်သွားပြီလား ၊၊ ထပ်မချက်တော့ဘူးလား ၊၊ဗိုက်စာလို့ ၊၊ လာငြီကြတာဗျ ၊၊ ကွိကွိ
nu-san November 26, 2008 at 6:06 PM
မဇနိချက်ထားတဲ့ နဘဲကို ကြည့်ပြီး စားချင်လိုက်တာ.. အမက ကိုယ်တိုင်တော့ တခါမှမချက်ဖူးဘူး.. ဆိုင်မှာတော့ ၁ ခါ ၀ယ်စားဖူးတယ်.. သိပ်တောင်မမှတ်မိချင်တော့ဘူး.. မဇနိဆီလာလည်ရင် ပြန်မှတ်မိသွားအောင် ချက်ကျွေးနော်.. ကိုဇနိကို သတိရတယ်ပြောပြီး ငိုရင်းနဲ့ နဘဲတွေ မစားနဲ့ဦးနော်... :)